Xagee laga soo booqdaa Somaliska.com | Somaliska
Warkaan waa mid hore, hada Somaliska.com waxaa soo booqda dad ka badan 30,000 bishii.
Tan iyo markii aan hawada galiyay boggaan Somaliska.com waxaa soo [caption id="attachment_773" align="alignright" width="300" caption="Sweden magaalooyinka laga soo booqdo Somaliska.com"] [/caption] booqday kumanaan Soomaali ah oo caalamka kala joogaa, ayadoo inta badan dadka ku xiran Somaliska.com ay naga soo booqdaan gudaha dalka Sweden maadaama uu boggan u adeego Bulshada Sweden. Kamuunada iyo magaalooyinka kala duwan ee Sweden ayaa aad looga akhristaa Somaliska, ayadoo magaalooyinka dadka ugu badan ay naga soo booqdaan ay ka mid yihiin Stockholm, Göteborg, Malmö, Fagersta, Linköping, Västarås, Norrköping iyo kamuuno kale oo aad u fara badan oo ay ku jiraan waqooyiga sida Umeå iyo Sundsvall. Wadamada dibada ee nagala soo booqdo waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia, Djibouti, Somalia , USA, Malaysia, Pakistan, Italy, Greece iyo wadamo kale oo fara badan. Ugu dambeyntii ayaa sidoo kale waxaa xiriir nala soo sameeyay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga Sweden iyo dibada, anagoo isku daynay in aan caawino intii karaankeena ah. Hadaba waad mahadsantihiin ikhyaarta ku xiran boggan Somaliska - adeega aan u hayno bulshada Soomaaliyeedna waan sii wadi doonaa Insha Allah.
Tan iyo markii aan hawada galiyay boggaan Somaliska.com waxaa soo
Sweden magaalooyinka laga soo booqdo Somaliska.com
booqday kumanaan Soomaali ah oo caalamka kala joogaa, ayadoo inta badan dadka ku xiran Somaliska.com ay naga soo booqdaan gudaha dalka Sweden maadaama uu boggan u adeego Bulshada Sweden.
Kamuunada iyo magaalooyinka kala duwan ee Sweden ayaa aad looga akhristaa Somaliska, ayadoo magaalooyinka dadka ugu badan ay naga soo booqdaan ay ka mid yihiin Stockholm, Göteborg, Malmö, Fagersta, Linköping, Västarås, Norrköping iyo kamuuno kale oo aad u fara badan oo ay ku jiraan waqooyiga sida Umeå iyo Sundsvall.
Wadamada dibada ee nagala soo booqdo waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia, Djibouti, Somalia , USA, Malaysia, Pakistan, Italy, Greece iyo wadamo kale oo fara badan.
Ugu dambeyntii ayaa sidoo kale waxaa xiriir nala soo sameeyay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga Sweden iyo dibada, anagoo isku daynay in aan caawino intii karaankeena ah. Hadaba waad mahadsantihiin ikhyaarta ku xiran boggan Somaliska – adeega aan u hayno bulshada Soomaaliyeedna waan sii wadi doonaa Insha Allah.
Dhakhaatiirta Waqooyiga Iswiidhan oo diiday gudniinka wiilasha.
abdi razak mohamed haaji yusuf oo jooga ugandha kampala says:
marka hore waan salamy bahda somaliska.com waan teegersanahay walalhey sida ay noogu heellan yihin soo tabinta wararka waana ku faraxsanahy wana soo dhaweyneyna webka somalisak.com waxana ka mid ahay dadka sida qaaska ugu xiran mar walbana aqrista waxan idin rajeynaa sidas & si kasi fican inaad sii wadi doontan insha alah wabilahi towfiq
Abdulkadir -oo jooga-Garowe says:
October 25, 2010 at 04:44
Aniga oo jooga-Garowe ayaan la socdaa arimaha sweden iyo xaalka ay ugu noolyihiin Soomaalida..
marka hore aad ayaad u mahadsan tihiin bahda shabakada Soomaaliyeed,waxaana idiin rajayanayaa in aad hadafkiina iyo mida umada soomaaliyeed in alle ina wada gaarsiiyo.
Somaliska… mahadsanidiin in badan ..
Geldon addis ababa says:
Walaalo jimcale waad salamantahay.
Maxad kawarhaysa wasirki laanta socdalka tobias billstrom uu balan qaaday inudib u egayo sharciga cusub ee laguwareray.
October 25, 2010 at 14:40
Waad ku mahadsantihiin fariimah, Geldon walaal wali waxaan ka sugaynaa laanta socdaalka iyo wasaarada in ay soo bandhigaan wixii xal ah. Runtii wasiirka waxa uu yiri dowlada ayaa ka wada hadlaysa taasoo macneheedu yahay in wasiirada iyo raysal wasaaruhu ay arinta ka wada hadli doonaan.
marka insha Allah wixii akhbaar ee arintaas ku soo kordha waxaad ka heli doontaan Somaliska.
Ilhaan oo joogta nairobi says:
Walaalo jimcale asc xildhibankeena cusub cabdirasaq wabaari waa inuu ka dhadaadhiciyo xibigiisa sharciga cusub wax kabadal oo aysomalida ufududaayaan sidi ay khaarabadooda uulamidomilahaayeen.
fu_aad mohamed aaden says:
ANIGOO ah fu aad mohamed .waxaan bogaadin usoo jeedinayaa akhiyaarta Soomaaliyeed ee isu taagtay in ay wixii macluumaad ah lasocod siiyaan Soomaalida ku firidhsan aduun waynaha iyo gaar ahaanba kuwa ku nool wadanka Sweden magalooyinkeeda kaladuwan.
Aniga waa markii iigu horeysay ee aan akhristo website Somaliska.com. run ahaantiina waan ku farxay ..
waxaan idin ku hanbalyeynayaa guusha weyn ee aad gaadheen .waana idinku taageerayaa.
abdi razak mohamed haaji yusuf oo joga kampal ugandha says:
s/c marka jimcale waan ku salamay walal marka hore salan kadib waxan salamaya dhaman bahda somaliska & inta ku xiran webka sida aad la socoto dowlada sweden wali wax war meysa so sarin sida uu yiri wasirka socdalka wali waxa laga war dhowraya wasirka warkisa ayaa la raba in ay wada mel mariyan maxa yelay somalida waa dad masakin ah malmahan waxa dhacda in ita badan dadka lasiyo apeal oo aan looga baran dowlada sweden marka waxan rajeyneyna in alle xal kale u keno soomalida mida kale xildhibanka waaberi waxan rajeyneyna in uu wax ka qabto dhibaatada lagu hayo dad soomalida ah maxa yelay asiga ayaa dhahay hadi an ku soo baxo xubinimada barlamanka sweden wax walbo waan u fududeyn doonaa xildhibanka waxan ka rajeynaa in alle la garab galo xilka culus ee loo dhibay oo u hayo umada somalida & umadaha kale waxan rajeyna in uu wax ka qaban doono caqabadaha heysta soo malida wabilahi towfiiq
November 20, 2010 at 17:38
walaalahay dhamaan soomaalidda joogta wadanka sweden oo dhaan waa iina baanabaxdiin saddax malmood ee sosocdo
waa dhaanteenta ok
zainab milaano says:
wan idin salaamaya dhaman bahda ka howl gasho shabakada somaliska.com ee ku howlan u adeegida shacabka somaliyeed gar ahaan reer sweden waxana idin leeyahay mahadsanidin anyway
asc walal marka hore wad mahadsan tihiin aad iyo aad ilahay haidin la garab galo dadaal kiina walal marka xigta waxan rabaa telka aad leedihiin inad nosoo qortan idin koo mahadsan
January 11, 2011 at 22:06
Walaal waa mahadsantahay…wixii xiriir ah waxaad nagala soo sameyn kartaa info@somaliska.com waa emailkeena aan markasta aqrino. haddii aad jeceshahay in aad la xiriirto dhalinyarada wada dadaalada la xiriira arimaha socdaalka waxaad la xiriiri kartaa Bashiir Cabdi (Stockholm) 0767118788 ama Siciid Cabdi Cusmaan 0700414465 (Uppsala).
ali muhammed nor says:
WAA KU FARAXSAN NAHAY WARKAAN SOO YEERAY WAA WATFARXAD LEH MAASHA ALAAH WAAN SOO DHAWAYNAYNAA XISBIGAA MOLJÖPART GA WAA XISBI WANAAGSAN
February 6, 2011 at 17:43
HADII AAN NAHAY REER VÄXJÖ WAAN SOO DHAY NAYNAA WARKAAN XISBIGAAN WAAN KA NOQONAYNAA XUBNO MUHIIM AH
March 6, 2011 at 11:15
asc marka hore waan kufaraxsanahay dadaalka aad wadaan walaalayaal maasha allah ilaahay ha idinla garabgalo waxaan rabaa inaan ogaado maxaa hagaa´gay xagee wax marayaan
March 19, 2011 at 16:55
A.S.C.wada madsantihina waalahena somalska subaxa walba wan ilaliya wargeskina wixi kuso kora dho dadalkina halka kasiwad
March 19, 2011 at 17:04
a.s.c. hadna nahya hooyoyinka Lessebo wanku farxsanhya warka kasobaxya dowalda iswedhan alha noga dhigo mida qerleha idankan wan idan ku hablyenena warka qimahle adnoso gudabisana hada dihina somaliska.com